DEG-DEG: Toni Kroos Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Kubadda Cagta Caalamiga Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Toni Kroos Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Kubadda Cagta Caalamiga Ah
DEG-DEG: Toni Kroos Oo Ka Fadhiistay Ciyaaraha Kubadda Cagta Caalamiga Ah
July 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 0
Xiddiga khadka dhexe ee reer Germany ee Toni Kroos ayaa ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta caalamiga ah isagoo 31 jir ah, maalmo kaddib markii ay wareegga 16ka kaga hadheen tartanka Euro 2020.
Kroos ayaa ku dhawaaqay inuu hawlgab ka noqday u ciyaarista dalkiisa Germany oo uu u saftay 106 kulan, kulana guuleystay Koobkii Adduunka 2014.
Kubbad-sameeyaha Real Madrid ayaa go’aansaday inuu ka fadhiisto ciyaaraha caalamiga ah iyadoo aanay wali kubaddiisa fari ka qodnayn oo ay da’diisu yartahay, waxaana uu soo afjaray u ciyaarista Die Mannschaft oo uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay 2010, isagoo hadda wixii ka dambeeyana diiraddiisa oo dhan saari doona kooxdiisa.
Kulankii ugu dambeeyey ee uu Kroos saftay ayaa waxa uu noqonayaa ciyaartii guul-darradu kasoo gaadhay ee xulka qaranka Engaldn uu kaga badiyey 2-0, isla markaana ay kaga hadheen tartanka Euro.
Qoraal dheer oo uu ku daabacay bartiisa bulhsada ee Instagram ayuu Toni Kroos ku yidhi: “Waxa aan xulka Germany u ciyaaray 106 jeer. Ma jiri doonto waqti kale [oo aan u ciyaarayo].
“Waxa aan rajaynayay, wax walbana aan mar kale u sameeyey sidii aan kulamadayda caalamiga ah ugu soo afjari lahaa 109 ciyaarood ee aan ugula guuleysan lahaa tartanka qaramada Yurub ee ay u noqon lahayd dhamaadka.
“Waqti hore ayaan qaatay in aan ka fadhiisto ciyaaraha caalamiga ah kaddib tartanka [Euro 2020]. Waqti dheer ayay ii caddayd in aanan ciyaari doonin koobka Adduunka 2022 ee Qatar. Sababta weyn waa in aan doonayo in aan yoolkayga oo dhan iskugu geeyo hadafkayga Real Madrid ee sannadaha soo socda. Waxa intaas dheer, laga bilaabo hadda, waxa aan naftayda u ogolaanaya inay fasax ka noqoto ciyaaraha caalamiga ah oo 11 sannadood aan kusoo jiray.
“Waxa kale oo intaa dheer, waxa aan ahay xaasle iyo aabbo, waxa aanan doonayaa in aan waqti la qaato xaaskayga iyo saddexdayda carruurta ah.
“Sharaf weyn ayay ii ahayd in aan xisho shaadhkan muddo dheer, waxaanay ii samaysay sharaf iyo qiimo.
“Waad Mahadsan tihiin taageereyaasha i garab taagnaa ee ii sacbinayay, iina qaylinayay. Waxa kale oo aad ku mahadsan tihiin dhalleecayntii ii ahayd dhiirigelinta.
“Ugu dambayntii waxa aan aad ugu mahad celinayaa Jogi Low [Tababaraha xulka qaranka Germany]. Waxa uu iga dhigay ciyaartoy heer caalami ah oo ku guuleystay Koob Adduun. Wuu i aaminay. Waxa aanu wada qornay sheeko guul oo waqti dheer ah.
“Sharaf ayay ii ahayd, inaan si fiican usoo shaqeeyey, waxa aanan nasiib wanaagsan iyo guul u rajaynayaa Hansi Flick.”
Kroos ayaa ciyaaartii ugu horreysay ee qarankiisa Germany uu u saftay waxay ahayd March 2010 oo ay la ciyaareen xulka Argentina, waxaanu kala qayb-galay saddex koob Adduun oo sannadkii 2014 ay ku guuleysteen Koobka. Waxa kale oo uu kala qayb-galay saddex Euro.